ပါစတာ - ဝီကီပီးဒီးယား
ပါစတာအမျိုးမျိုးအား စုရိုက်ထားသည်ကို တွေ့ရပုံ
Cookbook: ပါစတာ Media: ပါစတာ
ပါစတာ ဆိုသည်မှာ အီတလီ ရိုးရာဟင်းရာများ၏ အဓိကအမယ်တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ ၁၁၅၄ ခုနှစ်ကတည်းကစားကြကြောင်း စစ္စလီရှိ မှတ်တမ်းအရ သိရသည်။ ပါစတာဖြင့် ဟင်းလျာအများအပြားပြုလုပ်ကြသည်။ ပွဆေးမထည့်ထားသည့် ဒူရန် (durum wheat) ဂျုံနှစ်ကို ရေ (သို့) ဥတစ်မျိုးမျိုးဖြင့် နယ်ကာ ပုံစံအမျိုးမျိုးလုပ်၍ ပြုတ်၍ဖြစ်စေ၊ ဖုတ်၍ဖြစ်စေ ချက်ကြသည်။ အချို့ပါစတာတွင် အရောင်နှင့် အရသာအပြောင်းအလဲဖြစ်စေရန် သို့မဟုတ် ဂလူတင် (gluten) မပါစေရန် ဆန်မှုန့်ကို သုံးသည်။
ပါစတာကို အခြောက် (pasta secca) နှင့် အစိမ်း (pasta fresca) ဟူ၍ နှစ်မျိုးခွဲနိုင်သည်။ ပါစတာခြောက်ကို စီးပွားဖြစ်ထုတ်ရာတွင် အဓိကတွေ့ရသည်။ ပါစတာစိမ်းကိုလည်း ကုန်စုံဆိုင်များတွင် ရောင်းချသည်ကို တွေ့နိုင်သည်။ သို့သော်လည်း အဆိုပါနှစ်မျိုးစလုံးကို အိမ်၌ပင် ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်၍ ရသည်။
အမျိုးအစားမှာ နှစ်မျိုးသာဖြစ်သော်လည်း ပုံစံမှာမူ အစားစားဖြစ်နိုင်သည်။ စာအုပ်ပေါင်း (၁၃၀၀) ကျော်ကို လေ့လာရာ မျိုးကွဲ (၃၁၀) အထိရှိကြောင်း သိရသည်။ အီတလီတွင်ပင် ဒေသအလိုက် ပါစတာတစ်မျိုး၌ အမည်ကွဲ များရှိနေသည်။ ဥပမာဆိုသော် ကာဗက်တယ်လီ (cavatelli) တွင် နေရာဒေသအလိုက် အခြားအမည် (၂၈) မျိုး ရှိသည်။ အတွေ့များသည့် ပုံစံတို့မှာ အတို၊ အရှည်၊ ခေါင်းပေါက်၊ အပြား၊ အရွက်၊ စွပ်ပြုတ်နှင့် အလှဆင်ရာတွင်သုံးရန် ရုပ်ပုံငယ်များ ဖြစ်ကြသည်။
ပါစတာစိမ်းရော ပါစတာခြောက်ပါသုံးသည့် အီတလီလက်ရာ ပါစတာဟင်းပုံစံတို့မှာ ပါစတာကိုချက်ကာ အချဉ်ရည် သို့မဟုတ် ဟင်းခတ်တို့ထည့်ထားသည့် ပါစတာ ရှူတာ (pasta asciutta)၊ စွပ်ပြုတ်တွင် ပါစတာထည့်ထားသည့် ပါစတာ အင် ဘရိုဒို (pasta in brodo) နှင့် ပါစတာကို မုန့်ဖိုတွင်ဖုတ်ကာ ဟင်းနှင့်တွဲစားရသည့် ပါစတာ အယ် ဖော်နို (pasta al forno) တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ပါစတာဟင်းလျာများမှာ ရိုးစင်းသော်လည်း ဟင်းလျာအလိုက် တည်ခင်းပုံ ကွဲပြားသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ပါစတာသုပ်ကို နေ့လယ်စာ၏ ပထမထပ်အဖြစ် ချပေးလေ့ရှိသည်။ အချို့ဟင်းလျာတို့ကိုမူ ညစာအတွက် သုံးသည်။ ထို့အပြင် ပါစတာအချဉ်ရည်မှာလည်း အရသာ၊ အရောင် နှင့် အပျစ်အကျဲ အမျိုးမျိုး ကွဲပြားမည် ဖြစ်သည်။
ချက်ထားသည့် ပါစတာအလွတ်တွင် အာဟာရအားဖြင့် ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ် ၃၁%၊ ပရိုတိန်း ၆% နှင့် အဆီအနည်းငယ်နှင့် မက်ဂနိစ်အချို့ ပါဝင်သည်။ သို့သော်လည်း ထိုပမာဏကို လိုအပ်သလို အတိုးအလျှော့ လုပ်နိုင်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် မည်သည့်နှံပင်မှမဆို ပါစတာဖြစ်နိုင်သည်။
↑ McClatchey၊ Caroline။ "How pasta became the world's favourite food"၊ BBC၊ 15 June 2011။ 23 March 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Padalino L, Conte A, Del Nobile MA (2016). "Overview on the General Approaches to Improve Gluten-Free Pasta and Bread". Foods5(4): 87. doi:10.3390/foods5040087. PMID 28231182.
↑ "Structural, Culinary, Nutritional and Anti-Nutritional Properties of High Protein, Gluten Free, 100% Legume Pasta." (2016). PLoS One 11 (9): e0160721. doi:10.1371/journal.pone.0160721. PMID 27603917.
↑ Zanini De Vita, Oretta, Encyclopedia of Pasta, University of California Press, ISBN 9780520255227
↑ Retrieved 21 March 2012။ Italianfood.about.com (10 April 2012)။ 30 July 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Pasta။ UK: Parragon Publishing။ 2005။ pp. 6–57။ ISBN 978-1405425162။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပါစတာ&oldid=428918" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈၊ ၀၈:၀၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။